Coronavirus: ‘Ragga ayaa dumarka uga badan iska dhagatirka xayiraadaha – Radio Damal
Coronavirus: ‘Ragga ayaa dumarka uga badan iska dhagatirka xayiraadaha
Khubarada Cilmu-nafsiga ayaa sheegay wiilasha dhalinyarada ah iney u badan yihiin kuwa jabiya xayiraadda marka loo eego gabdhaha dhalinyarada ah.
Koox khubara ah oo ka socotay jaamacadaha Sheffield iyo Ulster ayaa su’aalo weydiiyey 2,000 oo dhalinyara ah oo ay da’doodu u dhaxeyso 13-24 jir.
Kala bar dhalinyarada ay khubaradu su’aalaha weydiiyeen oo ay da’doodu u dhaxeyso 19-24 jir waxay sheegeen inta xayiraadaha la soo rogay iney saaxibbadood iyo qoysaskooda la kulmeen, halka 25% gabdhaha dhalinyarada ah ay sidaa si la mid ah sameeyeen.
Khubarada cilmibaadhista sameysay waxay dowladda ugu baaqeen iney ahmiyadda siiso diyaarinta farriimo si gaar ah dhalinyarada u quseeya.
Niyadjabka xayiraadda ka dhalatay
Kala bar dhalinyarada su’aalaha la weydiiyey ee daraasadda laga qayb geliyey oo ay tiradoodu gaadheyso 917, waxay sheegeen xayiraadaha iney ku abuureen niyadjab gaar ahanna kuwa waalidkoodu yahay cidda keli ah ee u soo shaqeeya.
Dhalinyarada niyadjabka iyo cadaadiska noocaasi la kulmo ayaa noqday kuwa ugu badan ee awaamirta xayiraadda jabiyo si ay ula kulmaan saaxibbadood sidaana ay guriga uga baxaan.
Halka kuwooda xayiraadda walaaca kala kulmo ay raacaan talooyinka kala fogaanshaha gacmahoodana si joogta ah u dhaqaan.
Dr Liat Levita oo ka socota jaamadda Sheffield waxay sheegtay caafimaadka maskaxda iyo awaamiirta oo loo hoggaansami waayo iney isku xirneen, balse waxay naga caawineysaa inaan ogaanno sababta aay dad badan sidaasi u sameeynayaan.
“Marka uu qofku sii niyadjabo, waxaa sii yaraaneyso hoggaansanaanta iyo dhiirragelinta uu muujinayo.
Barafasoor ku takhasusay Cilmunafsiga oo ka socda Kulliyadda London, Barafaor Dame Til Wykes wuxuu sheegay qofka oo walaac dareemo waxay keentaa inuu waayo tageerada bulsho uu heli lahaa.
“Su’aasha ugu muhiimsan waxay tahay walaacaasi intee in le’eg ayuu ku dhammaani sida oo kalana dhalinyarada taageero noocee ayey u baahan yihiin.”
“Xaaladdan waxay leedahay saameyn halis ah gaar ahaan dadka ay soo foodsaarto xaaladda caafimaadka maskaxda.”
Dr Levita waxay sheegtay iney waafaqsan tahay oo ay dooneyn in xilligan uu socda cudurka safmarka ee Coronavirus uu jiro dhalinyarada laga caawiyo dhibaatooyinka maskaxeed ee la soo derso.
“Haddii aad lug ka jabto, laba bilood sugi meysid si aad isbitaal u aaddo oo lugta jaban laguugu kabo” ayey tiri.
Ragga dhalinyarada ‘oo bareera khatar badan’
Cilmibaadhayaashu waxay sheegeen 150-280 dhalinyaro rag ah oo ay da’doodu u dhaxeyso 19-24 jir inay la kulmeen saaxibbadood inta ay xayiraadda jirtay, iyada oo qaar ka mid ah awaamiirta ay jabiyeen ay booliska u xireen ama ay u ganaaxeen.
Dhalinyarada da’daasi ku jirtay waxaa la sheegay intooda badan iney aminsaneyn iney soo foodsaarto khatarta Covid-19, iyaga oo weliba aaminsan iney awaamiirta dowladdu micna badan ku fadhinin.
Dr Levita waxay sheegtay “in la ogyahay ragga iney u bareeri ogyihiin khataraha taasoo ah mid ay aaminsan yihiin khubarada cilmunafsiga.”
Natiijada daraasadda ee la shaaciyey ayaa ku soo beegantay xilli uu taliska guud ee Booliska uu sheegay seddex meelood meel dadka loo ganaaxay iney ku xadgudbeen awaamiirta xayiraadda ay da’odooda u dhaxeysay 18-24 jir, 10-kii qof oo dadkaasi ka mid ahna 8 ka mid ah ay ahaayeen rag.
Waxayna khubarada cilmunafsiga sheegeen dowladda in looga baahan yahay iney sharraxaan sababaha loogu baahday awaamiirta kala fogaashaha si ay dhalinyaradu u fahmaan waxa keenay xayiraadda.